ICW inogumisa kubatana kwayo neNetflix ... Farewell Arrowverse uye Riverdale? - TELES RELAY
HOME » TECH & TELECOM ICW inogumisa kubatana kwayo neNetflix ... Farewell Arrowverse uye Riverdale?
Netflix uye CW vangopedzisa kubatana kwavo chete, iyo yave ichichishanda kubvira 2011. Shanduro yeSVOD yakavimbisa kuparidzira kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvemaketani, aine Warner uye CBS. Uye vamwe vainyanya kukoshesa.
Izvi zvaive zvakanyanya kuitika kune avo vanobatanidzwa Arrowversede chigaro kana kubva Riverdale. Vechidiki vanozviratidza vanoziva kubudirira kwakanyanya kwazvo muFrance, sezvo ndiyo yakanyanya kudyiwa nhepfenyuro yeSVOD pamba muna March (maererano neCCC).
Kuguma kwechibvumirano ichi kunoreva kuti mitsva yakatarwa mumugwagwa haichazogadziriswa pakarepo paNetflix. Chimwe chezvikamu zvitsva zvinogadziriswa nechekupedzisira zvinogona kutengeswa pane dzimwe nzvimbo, uye naizvozvo kune akakwidziridza. Mashoko akanaka echikwata chemangwana reWarner, icho chichakwanisa kuwedzera zviri mukati maro nyore nyore nekuda kwezvinhu zvitsva zvakafanana "Batwoman""Nancy Drew" kana kuti yakareba kwenguva refu yakamirira Riverdaleainzi "Katy Keene".
maererano DeadlineNetflix inofanira kunge ichichengetedza nyaya dzakatove dziri kuparidzirwa, kunyange panguva dzinouya. Uyezve hapana chinozoita kuti irege kudzivirirwa pane zvinyorwa zvataurwa pamusoro apa.
Iyo yakasimba inofanirwa kuenzanirana nedambudziko iri, nokuti chikamu chakanaka chevakaroorana navo vanozvitsaura kuti vape sarudzo yavo. Iyi ndiyo nyaya yeDisney juggernaut, iyo yakamisa zvose Marvel series dzakamboparadzirwa pachikuva. Ndicho chikonzero nei Netflix iri kuisa purogiramu pamwe chete nekutsvaga mazana emamiriyoni emadhora muzvinyorwa zvakakwana. Uye pamberi pe "kukurumidzira", vatungamiri havafaniri kumira ipapo. Izvo zvinogona kunyanya kuverenga pamusoro pevamwe vanoita mamiriyoni eE150 kuti vatevere.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.journaldugeek.com/2019/05/17/cw-met-fin-a-partenariat-netflix-adieu-arrowverse-riverdale/